Deegaanka Gendershe Ee Gobolka Shabellaha Hoose ayey ciidamada AMISOM waxa ay ku dileen dad rayid ah – STAR FM SOMALIA
Deegaanka Gendershe Ee Gobolka Shabellaha Hoose ayey ciidamada AMISOM waxa ay ku dileen dad rayid ah
Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika oo bilaa dagaal kula wareegay Deegaanka Gendershe Ee Gobolka Shabellaha Hoose, ayaa waxay ku dileen Ugaas Siidow Maxamed, oo ka mid ahaa Odayaasha Golaha Dhaqanka Gobolka Shabellaha Hoose.
Gendershe waxay ku taallaa wadada dhinaca badda ee xiriirisa Magaalooyinka Muqdisho iyo Marka, iyadoo sanadkii hore ay la wareegen Ciidamada Dowladda & Amisom, inkastoo ay dib kaga soo baxeen.
Askari ka tirsan Ciidanka Amisom, ayaa si bareer ah rasaas u huwiyay Ugaas Siidow Maxamed, xilli Ciidanka Amisom ay gudaha u soo galayen Deegaankaasi, isla-markaana uu Ugaasku fadhiyay goob bannaan.
Rasaastii lagu dilay Ugaaska, ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacantay laba ka mid ah dadka reer Gendershe, waxaana dhaawacyadooda loo qaaday goobaha caafimaadka, si wax looga qabto xaaladooda.
Ugaas C/qaadir oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan Gendershe, ayaa si xoogan u cambaareeyay tallaabada ay Ciidanka Midowga Afrika ku dileen Ugaas Siidow Maxamed.
Ugaas C/qaadir wuxuu tibaaxay Amisom in dalka ku joogto ogolaanshaha inay ka qayb qaadato nabadda iyo xasiloonida, laakiin aanay u joogin inay ku gumaado buu yiri shacabka Somaliyeed, isagoona diiday inay aqbalaan dilalka ceynkani oo kala ah.
Sidoo kale waxa uu Dowladda Somaliya iyo Caalamkaba uu ugu yeeray in si deg deg ah wax looga qabto dhibaatada ay gaysanayso Amisom, Maxkamadna la horkeeno askarigii dilay Ugaaska.
Dowladda Somaliya, ayaan si adag Ciidanka Amisom ugala xisaabtamin dhibaatada ay u gaysanayan shacabka, waana taa midda keentay inay si joogto ah ugu dhiiradan waxyeelaynta shacabka.
Suuqa degmada xamar weyne ayaa waxaa qabsaday dab dhaliyey qasaaro
A/Wasaaradda Caafimaadka, C/khani Sheekh Cumar, ayaa waxa uu xaqiijiyay 24 sano ka dib inay dib u furayn Xaruntii Sheybaarka Dowladda.